ဘယ်လိုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတိတ်၏ညစ်ညမ်းထံမှကွဲပြားခြားနားပါသလဲ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကသုံးစွဲသူများအတွက်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ်လို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမထိခိုက်တော့ဘူး။ ”
တကယ်တော့ဒီအဆင်ခြင်ခြင်းပျက်ယွင်းနေသည်ယုတ္တိအသံပေမယ့်။ Times ကပြောင်းလဲသွားတယ်-ဒါ porn နှင့်လမ်း porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။ Streaming porn, စမတ်ဖုန်း access ကိုယခုက virtual porn အားလုံးလွယ်ကူဦးနှောက် overstimulate မှစေပြီ။
တစ်ဦးက Reddit ပိုစတာ တစ်ချိန်ကကိုမေးမြန်း"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ျာလက် porn browsing ကြောင့်လက်ဝဲလက် masturbate မှပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ပါသလားဟုတ်ကဲ့၊ မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးသည်လှိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့“ ambi-wackstrous” ဖြစ်လာသည်။
တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ “ ပထမတော့ငါလုပ်မယ်၊ ပြီးတော့…” \_ t မရှိတော့ပါ။
“ ကျွန်တော်ဟာအင်တာနက်မသုံးစွဲမီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအားလုံး၏အမြင်အာရုံကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်သဘောမပေါက်နိုင်ပါ။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကငါတို့အားလုံး boobs တွေကိုကြည့်ချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအခွင့်အရေးကတစ်နှစ်မှာတစ်နှစ်၊ တစ်နှစ်လောက်လောက်ပဲရတယ်။ tits-on-tap ကနောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားတွေးမိတယ်။
ဤပြောင်းလဲမှုအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်အစစ်အမှန်လိင်ထက်ဗီဒီယိုဂိမျးမှုနဲ့အပြိုင်။ ၎င်းသည်သင်၏မျိုးဗီဇ၏နံပါတ်တစ် ဦး စားပေးမှုနှင့်အကြီးမားဆုံးသောသဘာဝဆုလာဘ်ကို (လိင်) - ပေါင်းစည်းပြီးအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော“ World of Warcraft” ၏အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြန့်ဖြူးပေးသောပေါင်းစပ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သင်၏ဘယ်ဘက်လက်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ဖိအားနှင့်မြန်နှုန်းကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏လက်ျာလက်သည်သင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့မျက်လုံးများမှေးမှိန်သွားသောအခါသင်၏နားများဖြည့်နေသောကြောင့်သင်၏ညာဘက်လက်သည်“ ရှာဖွေခြင်းမုဒ်” ကိုနှိပ်လိုက်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်သံစုံတီးဝိုင်းမလိုအပ်ပါ။
porn နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်မှကယ်နှုတ်သောလမ်း, ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ မြင် porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး (2011) မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
အိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အဆင်မပြေသေးပါ၊ ၎င်းသည်မမျှော်လင့်သောပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်
“ ငါ porn ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့တယ်။ လူတွေဟာလိင်ဆက်ဆံတာကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ် ကျွန်ုပ်သည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ရရှိသောလွန်ခဲ့သော ၁၈ လခန့်ကကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို၊ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းမှဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုချက်ချင်းအွန်လိုင်းကြည့်ခြင်းသို့သွားသည်။ တစ်ခါမှနာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပင်ကြည့်ရှုပြီးနောက် - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံမှုဘဝပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုမိလာသည်။ ငါမှာလုံးဝ ED ပြproblemsနာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ ယခုမူကား၊ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ငါမထနိုင်တော့ပါ။ တခါတရံငါကတစ်ခုရတယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကအလျင်အမြန်ပျော့လာပြီ။ လိင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်သည်။ ”
“ ဒီနေ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကမှကွာခြားချက်ရှိတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အမျိုးမျိုးသို့သွားပြီးသင်၏အလုပ်မှထွက်ပြီးသင်၏ဘ ၀ ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံထားမည်ဆိုလျှင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ထက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အမျိုးမျိုးကိုသွားပြီးပိုမိုလွတ်လပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာနိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးသောမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်အကြိုက်ဆုံးသော fetish ကိုပင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ဗီဒီယိုပြီးနောက်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်မှုသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှလျော့နည်းသွားပါက (သို့) သင်သည်တူညီသောအလောင်းများကိုနှစ်မိနစ်ကြာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူပျင်းနေလျှင်၊ အသစ်သောအရာများပြုလုပ်နေသော set အသစ်တစ်ခုသို့သင်ခုန်ကူးနိုင်သည်။ ဒါဟာအရင်ကထက်တကယ့်အရာအတွက်သင့်ရဲ့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုကိုပိုမိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်အလားအလာရှိပါတယ်။
အတိအကျ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထက်ပိုမိုယူအမြတ်ထုတ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများကိုမောင်း ကျော်လွန် ၎င်းတို့၏သဘာဝ libido - အသုံးပြုသူများသည် porn ကိုပြတင်းပေါက်များစွာတွင်ကြည့်။ အဆုံးမဲ့ရှာဖွေနိုင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းကိုကြည့်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်အပူဆုံးသောအရာများသို့လျင်မြန်စွာရှေ့သို့ရောက်သွားနိုင်သည်၊ လိင်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းသို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့၏မှန်အာရုံခံများကိုဗွီဒီယိုလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် cam-2-cam ဖြင့်မီးမွှေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အစွန်းရောက်အမျိုးအစားများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု - ထုတ်လုပ်ပစ္စည်းမှမြင့်တက်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ စက္ကန့်၊ ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ် ၇ ရက်ရနိုင်သည်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေကိုတုပတဲ့ virtual reality နဲ့လိင်ကစားစရာတွေနဲ့တိုးမြှင့်နေပါတယ်။
အဘယ်အရာကဤသဘာဝမဟုတ်သော“ မိတ်လိုက်ခြင်း” ကိုပြင်းထန်စေသနည်း။ Dopamine။ ၎င်းသည်ဆုလာဘ်ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူ၏အဓိကအာရုံကြောဓာတုဖြစ်သည်။ Dopamine အဆင့်ဆင့်သည်မည်သည့်အတွေ့အကြုံ၏တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည် (မှတ်မိသည်) သည်ဘာရိုမီတာဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကလိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကအခြားသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများထက် dopamine ကိုပိုမိုမြင့်တက်စေသည်။
လူအများစုက dopamine ကို "buzz", "သကြားဓာတ်မြင့်မားသော" သို့မဟုတ် orgasm ဆီသို့ ဦး တည်သောမောင်းနှင်မှုဟုယူဆကြသည်။ တကယ်တော့သူကရှင်သန်ရပ်တည်ရေးလိုအပ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သည်။ ယင်း အကွောငျးရငျး။ ဒါဟာချဉ်းကပ်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုထားရန်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ ထို့ပြင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည် အဘယ်အရာကိုမှတ်မိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် rewire မှကူညီခြင်းဖြင့်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရုံအတှကျအ dopamine ၏ spikes ထုတ်ယူနိုင်ရန်ဖြစ်ပျက် အားလုံး ကျနော်တို့ကစောင့်ကြည့်အပေါ်ဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲထားတဲ့အဘို့အ "အဓိက" လှုံ့ဆော်မှု၏
အားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှု: အံ့သြစရာ, ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်, ရွံရှာ
ဖို့မရှာ နှင့်ရှာဖွေခြင်း: ရှာဖွေစူးစမ်းနယ်မြေများ, အစားအစာသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်အခွင့်အလမ်းများ
တခုခု မျှော်လင့်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည်- မမျှော်လင့်ဘဲလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုသို့မဟုတ် အန္တရာယ်များ
ခေါ်ဆောင်သွားစကားပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့ကြပြီ။ ဒီတော့ရှိပါတယ် ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ neurochemical အလုအယက်။ ဒါပေမဲ့တခါ-a-လအသစ်အဆန်း Playboy အဖြစ်မကြာမီသင်စာမကျြနှာကိုဖွင့်အဖြစ်အငွေ့ပျံ။ မည်သူမဆိုခေါ်ဆိုခလို Playboy သို့တည်းမဟုတ် softcore ဗီဒီယိုများသည်“ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်” သို့မဟုတ်“ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသည်” လော။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစာတတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသက် ၁၂ နှစ်ကျော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်မလား။ ဂူဂဲလ် prowl ၏ "ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း" နှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါ။
“ Variety သည်ဘဝ၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်သည်” ဟူသောစကားစုသည် William Cowper မှ ၁၇၈၅ မှထွက်ပေါ်လာသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့် ပတ်သတ်၍ ကဗျာတစ်ပုဒ်မှဖြစ်သည်။ သို့သော်အင်တာနက်သည်မရေမတွက်နိုင်သော Tabasco ငံပြာရည်ကိုပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည် dopamine spikes။ ကျွန်ုပ်၏ဂူဂယ်လ်“ အပြာ” ရှာဖွေမှုသည် ၁.၃ ခန့်ပြန်လည်ရရှိသည် ဘီလီယံအထိ စာမျက်နှာ (ကျွန်ုပ်၏ထိပ်ဆုံးတစ်ဆယ်ရှိ“ မျက်စိကန်းသောသူများအတွက် Porn” နှင့်) ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ထင်လမ်းပင်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်မရှိဘဲ။ တကယ်တော့မကြာသေးခင်လေ့လာမှုများ (ဗီဒီယိုဂိမျး) အကြောင်းတရားများကြောင့် compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပြသကြ စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ.
"ဒါဟာတော်တော်လေးဆိုးရွားခဲ့သည်။ ငါကြက်တစ်ကောင်အိမ်ပြန်သွားပြီးတစ်ခါတလေမှာကျွန်မရဲ့d* ck ကိုတောင်မထနိုင်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ကငါ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာမိန်းကလေး ၅-၆ ယောက်ရှိတယ်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သူကိုယ်တိုင်ရှိနေသော်လည်းထိုလှည့်ကွက်ကိုမလုပ်ခဲ့ပါ။ ”
2007 ခုနှစ်, Kinsey သုတေသီများ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော erectile-disfunction (PIED) နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်လိင်အင်္ဂါအနိမ့်ကျသောလိင်စိတ်ကူးစက်ခြင်းကိုပထမဆုံးအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို“ နေရာအနှံ့တွေ့နေကျ” ရှိသည့်အရက်ဆိုင်နှင့်ရေချိုးကန်များမှဘာသာရပ်များ၏ထက်ဝက်ခန့်သည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စိုက်ထူမှုများမအောင်မြင်ပါ။ ဗီဒီယိုက porn ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များမှပြောနေတာခုနှစ်, သုတေသီများတွေ့ရှိ မြင့်မားထိတွေ့မှု ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ဗွီဒီယိုများသည်တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးပြီးပိုမိုအစွန်းရောက်သော၊ အထူးပြုထားသောသို့မဟုတ်“ kinky” အကြောင်းအရာကိုနှိုးဆွရန်လိုအပ်လာသည်။ သုတေသီများသည်သူတို့၏လေ့လာမှုကိုပိုမိုကွဲပြားသောကလစ်များထည့်သွင်းရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုရန်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူများ၏လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း၏လေးပုံတစ်ပုံသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ. ထိုကတည်းက, သက်သေအထောက်အထားတပ်ဆင်ထားခဲ့ပါသည် ကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည့်အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများအတွက်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်.
အဘယ်ကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ် dopamine ဆွဒီတော့စွဲလမ်းပါသနည်း အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ် ဒါဝိဒ်သည် Linden ရှင်းပြသည်မှာ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ဘိန်းဖြူထက်ပိုမိုများပြားသောအာရုံကြောဓာတုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သော်လည်းဘိန်းဖြူထက် ပို၍ များသောရာခိုင်နှုန်းသည် အဘယ်ကြောင့်? ဒါဟာ ဦး နှောက်လေ့ကျင့်ရေးဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ တစ်ဘူးလျှင်စီးကရက်အစီး ၂၀ မှတစ်ခုစီတိုင်းသည်ဆေးလိပ်သောက်သူအားအကျိုးရှိစေသည့်ဆေးလိပ်သောက်သူကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်မည်မျှမကြာခဏရိုက်နိုင်သနည်း။ အခြေခံစွဲမှာ "ရောဂါဗေဒသင်ယူမှု။ "
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့အဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းသည်တုန်လှုပ်ဖွယ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ထုတ်လုပ်ပုံရိပ်ယောင်နှင့် Puff အဖြစ်စုံလင်သောရိုက်ချက်၏ search အတွက်ကလစ်နှင့်အော်ဂဇင်စဉ်းစား ပိုမိုအားကောင်းတစ်ခုခု။ နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းထက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးရန်ကြိုးစားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်သူကား, porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူယောက်ျားတွေထဲကနေလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နားထောင်ကြလော့။ အဆိုပါ dopamine ယိုသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကအသိကိုသိ:
သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမဟုတ်ဘဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Hyper-stimulus ဖြစ်လို့ porn လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ထူးဆန်းသည့်အရာမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုမရှိပါကကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဲ့သို့မခံစားရပါ။ ငါကြိုးစားရင်တောင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်မလုံလောက်ဘူး။ အင်တာနက်မတိုင်ခင်တုန်းကဆိုရင်ကလေးဘဝတုန်းကလိုပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မရှိတော့ဘူး။ ”
ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းမှုဟာ dopamine hits တွေထက်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတယ်
Dopamine အားလုံး arousal မောင်း, ဒါပေမယ့်အစဉ်အဆက်ခေါ်ဆောင်သွားဆွပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်မှန်မှန်စီးအော်ဂဇင်မှရံဖန်ရံခါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေထက် ပို. အစွမ်းထက်စိတ်ထဲ-လေ့ကျင့်ရေးအတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း erotica တချို့ဦးနှောက်ထဲမှာအစွမ်းထက်စှဲဖနျတီးနိုငျအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာမှာ dopamine များများစွာသည်ကျေနပ်မှုမရရှိပါ. ၎င်း၏သတင်းစကားသည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်၊ ဆက်လုပ်ပါ!” အစားအစာ၊ လောင်းကစားနှင့်အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသုတေသနက dopamine အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုပြသသည် အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု numbs ဦး နှောက်၏။ ဤသည်ကစွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွားသွားနေသည်ဟုညွှန်ပြသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်သည်ပင်ကျေနပ်မှုမရှိပါ။ ဒီနေ့ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပုံပျက်။
တစ်နေဝင်အကဲခတ်ကြောင်တစ်ကောင် petting, သင်၏အကြိုက်ဆုံးအသင်းစောင့်ကြည့် ပိုပြီးပြင်းထန်အပျော်အပါးကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်။ ပုံမှန်အပျော်အပါးနှင့်အတူ, သငျသညျ dopamine အချက်ပြမှုများကိုရပြီးတော့သင့်ဦးနှောက် homeostasis ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ဆနျ့ကငျြအချို့လှုပ်ရှားမှုများ dopamine ရေရှည် dysregulate ဖို့အလားအလာရှိသည်။
စွဲလမ်းဆေးပညာ၏အမေရိကန် Society ရဲ့အမှန်စင်စစ် 2011 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် လိင်၊ အစာနှင့်လောင်းကစားခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသောလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ သူတို့သည်အရက်၊ ဘိန်းဖြူနှင့်လိင်ကိုစွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းသံသယမဖြစ်စေပါ။ စိတ်ပညာရှင် Philip Zimbardo ကလည်း“ နှိုးဆွမှုစွဲခြင်း” ၏အန္တရာယ်များကိုထောက်ပြခဲ့သည်။ (TED ဆွေးနွေးချက် ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို?)
တောင်မှလုလင်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသတိပေးနေကြသည်။ သူတို့ကအစညစ်ညမ်းတင်းမာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်များနှင့်ဖန်တီးထွက်ရှာဖွေနေကြပါတယ် အတုအယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ:
“ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကရက်ပေါင်း ၄ မှ ၆ နာရီအထိမူးနေတယ်။ အကောင်းဘက်မှာတော့လိင်မှုကိစ္စဟာလိင်မှုကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းသိသာထင်ရှားလာတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၅ ရက်အတွင်းနာရီပေါင်း ၃၀ ကျော်စောင့်ကြည့်ပြီးသောလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စသည်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာသည်။ ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောထိတ်လန့်စရာကောင်းသောအရာများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းများ၏အရည်အသွေးများကိုထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ. အဆက်မပြတ်နှိုးဆွခြင်းအပြင်စားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲစားသုံးမှုတွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဦး နှောက်၏သဘာ ၀ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုယန္တရားသည်အထွတ်အထိပ်တစ်ခုမဟုတ်လျှင်နာရီနှင့်ချီ။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုအချိန်တွင်ပင်အသုံးပြုသူများသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်နောက်ဆုံးတွင် ဦး နှောက်၏သဘာဝမကျေနပ်မှုစနစ်ကိုအစပျိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်သူသည်အခြားခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်ကိုကြည့်ဖို့မခံနိုငျသနညျး မျိုးပွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဗီဇ၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်သည်။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်” ဟူသောယုံကြည်ချက်သည်လစဉ်ခေတ်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် Playboy။ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေအင်တာနက် porn သည်“ Polemon-Go” သည်ယခင် erotica နှင့်ကွဲပြားသည်။ tic-tac-toe နှင့်တူသည်။ self-အစီရင်ခံစာများ ဤအမှုကိုထင်ရှားစေကြလော့။ “ ညစ်ညမ်းမျှတခြင်း” အစားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်အသစ်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည် ဦး နှောက်များစွာကိုမပြင်ဆင်နိုင်သေးပါ။
သင်၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည်အင်တာနက်အခြေခံသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်သည့်မှတ်ဉာဏ်ဘဏ်များမရှိပါ။ အကယ်၍ သူတို့ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့လျှင်သာမန် libido နှင့်သူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည်အလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေသည်။ သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုလျော့ကျလာခြင်းသို့မဟုတ်သင်အမြင့်ဆုံးသို့ညစ်ညမ်းရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်သင့်အနေဖြင့်သင့် ဦး နှောက်၏သဘာဝအစာစားချင်စိတ်ယန္တရားကိုကျော်လွှားပြီးစွဲလမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ပြုသည်။ သင့် ဦး နှောက်မှပြန်လာသည်အထိစောင့်ပါ ပုံမှန် sensitivity ကို။ ဆုတ်ခွာခက်ခဲပေမယ့်အကြံပေးချက်များနှင့်ထောက်ခံမှုဖြစ်နိုင်သည် ရရှိနိုင်ပါ.
သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာယနေ့ခေတ် erotica-at-a-swipe ကိုကိုင်တွယ်ရန်မဖွံ့ဖြိုးဘူး။ ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရုံသာမက ရိပ်မိ အဆုံးမဲ့ fertilization အခွင့်အလမ်းများသင်ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှပင်များနိုင်သမျှများနိုင်သမျှမြေသြဇာသေချာစေရန်၎င်း၏ dopamine“ နှင်တံ” ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဘဝပြေလည်သွားမည့်အစားမျက်မှောက်ခေတ်ကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့နိုးနေနိုင်သရွေ့စွဲလမ်းနေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုသတိမထားမိကြပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ။ ဧလျေဇာ Yudkowsky တစ်ချိန်ကရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်,
“ လူတွေကစုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုခံပိုင်ခွင့်ရှိပြီးလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိရင်ဈေးကွက်ကိုရောင်းနိုင်သမျှသွေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ စားသုံးသူအပေါ်အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုကိုစူပါလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသောအချက်ထက် ကျော်လွန်၍ ဈေးကွက်မက်လုံးသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ”
အဆိုပါလေ့လာပါ အလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုကိုညွှန်ပြကြောင်းအချက်ပြ။ (အခြားသူများ၏ကိုယ်တိုင်တင်ပြချက်များကိုဖတ်ပါ.သင်၏သူငယ်ချင်းများလုပ်နေသည့်အရာသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များဖြင့်သင်မသွားနိုင်ပါ sexologists သို့မဟုတ်ဆရာဝန်များ။ ဘယ်သို့သောအားဖြင့် Go သငျသညျ အသိပေးစာ။
Dial-up လုပ်တဲ့နေ့ကအင်တာနက်မကောင်းတဲ့ / နှေးကွေးပြီး smuttery အားလုံးကိုဘယ်မှာရှာရမှန်းမသိတဲ့အတွက်ရံဖန်ရံခါရုပ်ပုံလွှာကိုအရမ်းဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ယခုမြန်နှုန်းမြင့်မားသောမိုဘိုင်းဖုန်းများအထိပင်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးပိုမိုမြင့်မားသော resolution ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရှာဖွေခြင်းကိုတစ်နေ့လုံးလုပ်သောကိစ္စဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်ကျေနပ်။ ဦး နှောက်ကအမြဲလိုလို“ ပိုလိုတယ်” လို့ဒီလိုလိမ်ပြောတယ်။
“ opiate စွဲစွဲလမ်းမှုရှိပြီးလက်ရှိတွင် porn ကိုစွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့် porn သည်အမှန်စင်စစ်မှန်ကန်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်စတင်ခဲ့ပြီးအထက်တန်းကျောင်းရှိအမျိုးသမီးများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုတစ်သမတ်တည်းအကျိုးသက်ရောက်စေသောအကျင့်ဆိုးများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဘိန်းဖြူနဲ့အတူအနည်းဆုံးငါပိုက်ဆံရှိရင်ငါစာသင်ခန်းထဲဆက်ပြီးဆက်လုပ်နိုင်မယ်၊ အဆိုးရွားဆုံးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးနေစဉ်တောင်မှကျွန်ုပ်သည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာစဉ်းစားလိုက်ရင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ္တဇလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအတွက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားတယ်။ ”
တကယ်တော့ကျနော်တို့ယောက်ျားတွေထဲကနေအင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရနေသောလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုနားထောငျ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအရှုံးမပေးဖို့ထက်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံမှသာပြောရရင်၊ ငါဟာတကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမဟုတ်ဘဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Hyper-stimulus ဖြစ်တာကြောင့် porn ဆိုတာထင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ထူးဆန်းသည့်အရာမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုမရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားစဉ်ပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်မလွယ်ကူပါ။ ငါ porn မတိုင်မီကကလေးဘဝတုန်းကလိုပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မရှိတော့ဘူး။ ”
လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
ဤရွေ့ကား Lay ဆောင်းပါးများကိုအင်တာနက်ထူးခြားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင်းထောက်ပြ
(L) Dopamine (2009) သတင်းအချက်အလက်ရှာဖို့အတွက်သင်ကစွဲကို
(L) ကိုကြှနျုပျတို့ကိုရူးသွပ်မောင်းနှင်က်ဘ်လား? (2012)
(L) ဆေးရွက်ကြီးသကဲ့သို့စွဲလမ်းအင်တာနက်ရှိပါသလား? (2012)
(L) အွန်လိုင်းမှဘဝသည်သင့်အား 'ပေါက်ပေါက် ဦး နှောက်' ပေးသလား။ (၂၀၁၁)
(L) အင်တာနက်ကို compulsive Disorder: ကျနော်တို့ DSM အတွက်ဒါဟာ Include သငျ့သလော (2011)
ကျွန်တော့်အမှု၌၎င်းသည် (အားရကျေနပ်မှုမရှိ) (အမြဲဂရုမစိုက်ပါ) အမြဲတမ်းပင်ပန်းနေပြီး ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအခက်အခဲ၊ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ), ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ပေါ်မှာငါ့လက်ချောင်းကိုတင်နိုင်ဘူး (သို့မဟုတ်ချင်ကြဘူး) ။
ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အထွတ်အထိပ်မှာအော်ဂဇင်တော့ဘူးကောင်းသောခံစားရမပြောဘဲနေကြ၏။ ဒါဟာ Self-Medical ့လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ ၁၁-၁၂ မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ၂၂ နှစ်လောက်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးကငါ့ကိုလာဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်လိင်အင်္ဂါမှလုံးလုံးထုံထိုင်းနေသည်။ ကြိုတင်ပြီးစကားပြောနေစဉ်မှာငါခက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းခြင်းမရှိဘဲမိနစ်အနည်းငယ်လောက်လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါငါလှုံ့ဆျောမှုအများကြီးနှင့်အတူအလွန်အထွက်ဖြစ်ခြင်းသတိရပါ။ ငါ 14 အကြောင်းကိုအခါသမျှသောပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါ porn ကိုကြည့်တစ်ခုလုံးကိုတနင်္ဂနွေနှင့်ညနေပိုင်းသုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ကြည့်ခြင်းမပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏဆီးသွားရန်မလိုအပ်ပါ။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှုမှာတော်တော်လေးဆိုးတယ်။ ကျွန်တော်အိမ်သာအများကြီးသုံးနေတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ကျောနောက်ကွယ်တွင်ကျွန်ုပ်အကြောင်းပြောနေသည်ကိုပူပန်ခဲ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့်ငါအငွေ့ပျံနေချိန်တွင်လူများပြောသော / ထင်မြင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ပုံပျက်ယွင်းသွားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်၊ အသက် ၂၅ နှစ်တွင်စတင်ပြသခဲ့သည့်လက္ခဏာများမှာထူးဆန်းသောခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အလွန်တိမ်တိမ်နှင့်နီးကပ်သောအသံများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မျက်စိအတွင်းခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာပေါ်တွင်ခြောက်သွေ့ခြင်းခံစားရနိုင်သည်။ နံနက်အချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတွင်ထူးဆန်းသောမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားမှုတစ်ခုခံစားနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအဲဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးမရခင်မိနစ် ၄၀ ကျော်လေ့လာမှုကိုအာရုံစိုက်လို့မရခဲ့ဘူး၊ ငါရူးနေတယ် ထိုအခါငါ၌ငါဆီးချို (သွေးနိမ့်သကြား), မကောင်းတဲ့ရူပါရုံကို (ငါပြီးပြည့်စုံသောငါ၏အရူပါရုံကိုစမ်းသပ်) စဉ်းစားမိတယ်။ ငါ ADD သို့မဟုတ် ADHD ရှိတယ်လို့တောင်ထင်ခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအခါအားလျော်စွာတော်တော်လေးထကြွလွယ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအစည်းအဝေးများတွင်မလုံခြုံမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာမခံစားရပါ။
တစ်ခါတလေကလေးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ထကြွလွယ်သော၊ ကျွန်မရဲ့လိင်မှုကိစ္စဟာဘယ်လောက်အထိကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတောင်ငါခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအကြောင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့! နောက်ဆုံးတော့ညစ်ပတ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲ ၂ ပတ်လောက်သွားပြီးနောက်ငါအရမ်းပျော်တယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအရအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်မိန့်ခွန်းသည်တည်မြဲပြီးတည်ငြိမ်အေးဆေးသည်။ ငါရယ်နှင့်ငါ့မျက်နှာတပြင်လုံးနှင့်ပြုံး။ ငါချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ပရောပရည်လုပ်နိုင်တယ် လိင်အယူခံဝင်မှုကင်းမဲ့သည့်ခံစားချက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုပင်သတိပြုမိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုရရှိခဲ့သည်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အလုပ်မကိုင်နိုင်ခြင်း၊ တက္ကသိုလ်ခန်းမများ၌ပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ လူသေများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲငယ်ရွယ်သောမှအဟောင်းအမျိုးသမီးများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စွာခံစားနေရသည်။ စသည်တို့
အသည်းအငွေ့ပျံပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်စိတ်အခြေအနေကျဆင်းလာတယ်။ ငါကလူနှင့်အလွယ်တကူစိတ်ဆိုးရ။ ဒါဟာငါစဉ်းစားနိုင်သမျှ porn ၏စိတ်ထဲတစ်လမ်းအခြေအနေငါ့ကိုထားတော်မူ၏။ အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်စက်မှုကိုပျက်ပြားစေတယ်။ ငါအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာငါ့ခေါင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့အဖုံးပုံလေးရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါလုပ်မိတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက် (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ ၀ င်ပါသည်) ED သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတုန်လှုပ်စေသောပထမဆုံးအစစ်အမှန်ကွန်ကရစ် / ထိတ်လန့်ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုသည်မမှန်ဟုသဘောပေါက်စေသည်။
ငါ 16-17 ခဲ့သောအခါငါအတော်လေးလုံ့လရှိသူဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ငါ၏အညစ်ညမ်း-ကာလတစ်ဝက် 18 မှတဆင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါမျြးစိမျ့စိမျ့ကောင်လေးဖြစ်လာစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အရူးနဲ့တူဖိန်းဓာတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမှာမဆိုအားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုမခံစားရဘူး။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်လေ့ရှိတယ်၊ လူတွေကငါ့ကိုသတိပြုမိပြီးငါ့ကိုဆွဲဆောင်ပြီးစကားပြောချင်ကြတယ်။ လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါငါဟာယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ခွန်အားကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ မိန်းကလေးတွေကအဲဒီလိုသတိပြုမိပြီးငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတိုးပွားလာပြီးထိုစွမ်းအင်သည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့လူမှုရေးဘဝကဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုအိုမင်းခြင်းလို့အမြဲတမ်းစွပ်စွဲပေမဲ့ငါမှားခဲ့တယ်။ ငါတရားခံဖော်ထုတ်ခဲ့သည်အလွန်စိတ်သက်သာရာရ။ ငါစွမ်းအင်ကိုယခုပြန်လာသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။
သတိရပါ၊ သင့်ဘိုးဘေးဘီဘင်များတွင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ဘဏ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုအခြေခံစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ သူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ရှိခဲ့လျှင်အလိုဆန္ဒနှင့်သူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုတည်းကသာအလုပ်ကိုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုလျော့ကျလာခြင်းသို့မဟုတ်သင်အထွတ်အထိပ်သို့ညစ်ညမ်းရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်သင့်အနေဖြင့်သင့် ဦး နှောက်၏သဘာ ၀ ကျေနပ်မှုယန္တရားများကိုကျော်လွှားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲအထွတ်အထိပ်သို့မရောက်နိုင်ပါကသင့် ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်အာရုံခံနိုင်သည့်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်သည်အထိစောင့်ပါ။ သင့် ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေစဉ်၎င်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်အကြံဥာဏ်များနှင့်ထောက်ခံမှုများကိုရရှိနိုင်ပါသည် အများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များ.